Top 5 Manager Android Battery: raaxaysta la More Battery Power on Your Phone
Android telefoonada smart meel kasta oo aad sidaas oo caan ah, sababtoo ah qiimaha dheeraad ah oo macquul ah, tan oo muuqaalada iyo barnaamijyadooda. Astaamahani waa iyo barnaamijyadooda na ku degdegin inaad raadinta siyaabaha lagu sii baytariyada dheer socon. Bal aynu eegno qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee loo yaqaan in ay sii naga batteriga taleefanka smart Android tago dheer oo dheer.
Qaybta 1aad: Sida loo Eedayn Battery ee aad telefoonka dhakhso Qeybta 2: Talooyin in la hagaajiyo Battery Life Qeybta 3: Top 5 Android Battery Manager Apps
Qaybta 1aad: Sida loo Eedayn Battery ee aad telefoonka dhakhso
Si aad batteriga ka dhigi dheer, inaad u qaadaan si buuxda. Faaiidaysta telefoonada naga noqday sidii A, B, C, kaliya heli godka korontada iyo fur xeedho ah. Laakiin sida aynu wada ognahay, waxay qaadan doontaa illaa 2 saacadood si aad si buuxda u soo oogay, oo aan sida caadiga ah waa in si dhaqso ah. Waa hagaag, waxaa jira talooyin badan oo loo sameeyo si dhakhso ah oo waxtar leh ku amraya.
1. Shiddo hab diyaarad ama damiya mobile gebi ahaanba iyadoo xukun.
2. Halkii isticmaalaya PC iyo dekedaha USB laptop ee inuu dalaco telefoonada naga, isticmaali xeedho adabtarada siiyey casriga ah.
3. Ama iibsan xeedho in siin karaa amps dheeraad ah si aad si aad telefoon smart marin karo awood badan.
4. Isticmaal barnaamijyadooda sida xeedho AI si kor loogu qaado ilaa xukun ka dekedda PC`s USB ah.
5. Waxaa jira fiilooyinka USB micro in la timid laba USB dekedaha. Waxaad ku ool ah iyo kuwo ku si fiican u laban laabo kartaa amps in ay qaadaan aad telefoon smart.
Qeybta 2: Talooyin in la hagaajiyo Battery Life
1. Check goobaha isticmaalka Battery: In telefoonada Android, waxaan eegi kartaa isticmaalka batari qaybta goobaha iyo hubi app ama shaqo la isticmaalayo awood batari dheeraad ah. Waxyaabaha sida wallpapers nool, dhawaaqa rada iyo bandhigay daadi doonaa awooda batariga ka badan. Qabsashada goobaha kuwaas oo sida aad u siin doonaa in ka badan nolosha batariga ka badan aad waligaa ah kuwaad Sheeganayseen.
2. Xir goobaha .Wadashaqayntaas: Bakhtii goobaha .Wadashaqayntaas ee aad barnaamijyadooda bulshada sida Facebook, twitter iyo Gmail. Just hubiyo wixii ogeysiin ah ee gacanta ay ugu galaan barnaamijyadooda ka badan la isticmaalayo farriimaha ee. Goobaha Kuwaas oo si weyn u kordhin doonaa nolosha batteriga.
3. leexo xiriir aan loo baahnayn off: Hadda telefoonada ugu soo la Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi oo LTE. Ma waxaan u baahan tahay waqtiga oo dhan. Sidaas dami goobaha kuwii oo badbaadiyo in ka badan nus ka mid ah noloshaada batteriga. Out of dhan qaababka, GPS cuni doono ilaa boqolkiiba 1 batteriga daqiiqad kasta.
4. In loo sahlo hab keydinta batteriga: Qaar ka mid ah our telefoonada smart la yimaadaan goobaha ku badbaado batari preinstalled iyaga in. Dejinta qaar ka mid ah sifooyinka iyo goobaha in Low ayaa sidoo kale ka shaqeyn doonaan.
5. dila barnaamijyadooda aan loo baahnayn: Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah Chine in aanan isticmaalaan oo dhan, sida Chine preinstalled oo lagu qasbay in la joojin karo ama la dilay iyada oo aan soo afjarno qalabka. Just u tag qaybta app ee goobaha iyo dilaan ama joojiyaan barnaamijyadooda ku annagu uma baahnin.
6. Update barnaamijyadooda: CUSBOONAYSIINTA barnaamijyadooda ka saari doonaan wax cayayaanka iyo baadi in baabbi'iyee awood dheeraad ah adiga oo aan ogeysiiskan.
7. Hoos ka baxaya in ugu yaraan: nuurka u barta ugu hooseeya hagaaji.
8. noqda hab duulimaad: Marka aad safar, jeedi phone galay hab horyaalka. Tan iyo halka telefoonka safraya isticmaala inta badan awood u leeyahay inuu sii joogo xiran shabakadda, gaar ahaan marka ay signalada waa yar yahay.
9. Soo iibso batari ama batari xeedho dheeraad ah: Isticmaal batari dheeraad ah si aad telefoonka socday muddo dheer.
10. Stop widgets aan loo baahnayn: Widgets joogto ah ka jaftaa telefoonnada gacanta aad casriyeysan ka barnaamijyadooda ka, si loo joojiyo iyaga oo isticmaalaya.
11. Isticmaalka soo jeeda madow: Haddii aad leedahay bandhigay LED markaas image mugdi ah ama madow ka dhigi doonaa sida aad wallpaper.
12. Calan fekero screen ugu yaraan, soo noqda mar shaashadda ka soo baxay goobaha u hooseeya.
13. hab gariir: Bakhtii hab gariir iyo u isticmaali markii ay la socoto hab aamusnaan kaliya.
14. hab daaran: Marka aad ha isticmaalin telefoonka aad Smart saacado qaar ka mid ah, noqon hab heegan on.
Qeybta 3: Top 5 Android Manager Battery Apps
Haddii aad telefoonka uusan haysan preinstalled hab keydinta batari, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loo soo dajiyo mid iskaa. Halkan waxaa ku qoran liiska barnaamijyadooda aad kala bixi karto si ay u maareeyaan nolol batteriga:
Easy Battery Saver 4.6 / 5 Free
Go Battery Saver iyo Power Widget 4.4 / 5 Free
Battery Daafaca 4.3 / 5 Free
Daafaca Casiirka 4.4 / 5 Free
Battery Doctor 4.5 / 5 Free
Mid ka mid ah barnaamijyadooda waxtar leh in run ahaantii waxay badbaadin kartaa nolosha qaar ka mid ah batariga leh oo kaa caawin doona inaad badbaadin ugu badnaan 50 boqolkiiba nolol batteriga.
Hababka horena la hab guud keydinta, hab keydinta caqli badan, iyo hab xoog weyn, hab sare iyo hab caadi ah. Dooro mid ka mid ah hab oo dhan ayaa la sameyn doonaa.
Fududee si ay u isticmaalaan.
Tayo badan oo ku saabsan hal milyan oo downloads.
UI Interactive oo fudud.
Dhiqlaha iyo khaladaadka lagu update dhawaan
Arrimaha la xiriir network sida Wi-Fi
Hoos-ada yar telefoonka
Download Manager Simple Audio ka Google Play Store >>
2. Tag Battery Saver iyo Power Widget
Tag baado batteriga iyo widget awood yimaado iyadoo fursado badan badbaadiyo batteriga oo aan u cusboonaynta kartaa in version xayaysiinta lacag la'aan ah aad u bixinaya qaar ka mid ah lacagta, laakiin hagaajinta ma loo baahan yahay.
Qiyaasta waqtiga batari harsan si sax ah iyo in la beddelo goobaha sida.
Hawlaha ayna batari One click.
Xoogaa A duldhigay marka aad u tagto version bixisay
Dhibaatooyinka in hab caadadii
Force ku dhow barnaamijyadooda qaar ka mid ah marka la isticmaalayo
Download Go Battery Saver iyo Power Widget ka Google Play Store >>
3. Battery Daafaca
Daafaca batari waa tababare kale batari fiican u Android isticmaala si kastaba qaar ku badbaadiyo nolosha batari dheeraad ah in ay smart telefoonada.
Features sida hagaagsan hanad, hurdada xasilloon, jeestay Wi-Fi off, iyo siyaasadda batari la'aan.
Dhibaatooyin isku xirnaanta Network
Download Battery Daafaca ka Google Play Store >>
Daafaca 4. Casiirka
JuiceDefender waxaa loo magacaabay batari baado ugu hufan in aad si fudud u ogaan kartaa gororinaysa awood ugu batteriga.
• interface Simple iyo dareen
• 5 hab horena la dhamaystiran Customization
• Auto toggle la xiriir network iyo xogta mobile
• Qaar ka mid ah qaababka aan la heli karo la version xorta ah
• signal Poor mararka qaarkood
• Dad badan ee ogolaanshaha uga baahan yahay
Download JuiceDefender ka Google Play Store >>
Battery Doctor waa sida barnaamijyadooda kale. Waxa kale oo ay ka heli lahaayeen barnaamijyadooda iyo goobaha gororinaysa awood ugu batteriga oo u maareyn si loo badbaadiyo u xoogga.
• 19 luqadood oo ay taageerayaan
• habka kharash Saddex-yada
• Kartida in la qiyaaso awooda ku haray
• interface Poor
• Marna ha ku amray, oo buuxa
Battery Doctor Download ka Google Play Store >>
Photos Android kaabta in Cloud & PC
Kaabta Data Android inay PC
Kaabta & Soo Celinta Device Android 1 Click
Transfer Xiriirada ka iPhone in Android
SMS Nuqul ka Android inay iPhone
> Resource > Android > Top Manager Battery Android 5: raaxaysta la More Battery Power on Your Phone